ပန်းနု နှင်းဆီ…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home & Garden » ပန်းနု နှင်းဆီ….	15
Posted by Ma Ei on May 15, 2015 in Home & Garden | 15 comments
ခြံထဲမှာ နှင်းဆီ နှစ်အိုးရှိတယ်…
ရေလောင်းရုံနဲ့ နှင်းဆီပန်းရောင်လေးတွေနွေ မိုးဆောင်း ပွင့်နေလိုက်တာ…
အရမ်းကိုလှလို့ အဖူး အပွင့် လေးတွေ တွေ့တိုင်းဓာတ်ပုံရိုက်ထားမိခဲ့တယ်…
ပန်းကလေးတွေတွေ့ရင် ကြည်ကြည်နူးနူး ပီတိဖြစ်မိတာမို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်…
ရွာသူား အားလုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ…
ခင်ဇော် says: နူးညံ့လိုက်တာ။
Ma Ei says: ပန်းနု နှင်းဆီ …
မြစပဲရိုး says: ဇရာ လို့ သာ ပေးလိုက်ပါတော့ အိ ရယ်။ lol:-)))))
သို့သော် ဒီ ပန်း ကတော့ ကြွေခါနီး ထိ လှ ပြ သွားတာနော။
Ma Ei says: .ရေမွှေးနှင်းဆီတော့ ဟုတ်ဖူး..
.ရိုးရိုးနှင်းဆီလေးပါဘဲ…ဇရာကို လှလှပပလေး ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်..
.အပင်မှာ ကြွေသည်ထိပဲ ထားလိုက်ပါတယ်…မခူးရက်လို့… Was this answer helpful?LikeDislike 138
​ဒေါ် လေး says: ပန်း​လေး​တွေမြင်​ရတာ တကယ်​စိတ်​ချမ်းသာတယ်​
Ma Ei says: တူတူဘဲ မလေး ရယ်…
အခင်းလိုက် ပန်းလေးတွေများတွေ့ရင် အရမ်းကို စိတ်ချမ်းသာ…
ပန်းစိုက်စားရင်တော့ ရောင်းရမှာ နှမျောလို့ စီးပွားဖြစ်ဦးမှာ…
ကြောင်ဝတုတ် says: ရေစက်လေးတွေတင်နေတဲ့ နှင်းဆီပန်းကြီးကို စိတ်ပြေနပြေထိုင်ပြီးတော့ Close up ရိုက်ချင်ထှာ…
နာ တော့ ခု အိုင်ဖုန်းနဲ့ ကင်မလာ ပလပ်ပေါင်းပြီး မက်ခရိုရိုက်ရတာ ပျော်နေတယ်။
ကြောင်ဝတုတ် says: အင်း… မက်ခရိုရိုက်ရတာ အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗျ…
ခင်ဇော် says: ကင်မလာ လေး ငှါးမယ်လားး???
Ma Ei says: နာမှာ့ ကင်မလာ Canon Power Shot A 2200 လေးနဲ့မျက်နှာ ငယ်လိုက်တာအေ…
Alincho says: အင်းပန်းလေးတွေနဲ့ တရားပြသွားသလိုပါပဲလား၊ အနိစ္စ-အနိစ္စ
Ma Ma says: အိမ်မှာလည်း ပန်းပွင့်တိုင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာ အမော။
ပန်းကလည်း ပွင့်ခဲပ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
Alinsett @ Maung Thura says: .ဖွေးဖွေးထက်တောင် လှတယ် ပြောရင်…မကောင်းဘူးထင့်…
အောင် မိုးသူ says: ရေမွှေးနှစ်ဆီလေးပါလား။ မွှေးမှမွှေး။